ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့(SCO) “ ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် ၂၀၂၁” စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ - Xinhua News Agency
အိုရန်ဘာ့ဂ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(SCO)အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကို ကြာသပတေးနေ့က ရုရှားနိုင်ငံ အိုရန်ဘာ့ဂ်ရှိ Donguzလေ့ကျင့်ရေးကွင်းတွင် ကျည်အစစ်ဖြင့် ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလေ့ကျင့်မှုသည် တစ်နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ရာ ခြေလျင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များ၊ ချေမှုန်းရေးယာဉ်များဖြင့် ပစ်မှတ်ကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ အိုရန်ဘာ့ဂ်ပြည်နယ် Donguzလေ့ကျင့်ရေးကွင်းတွင် ကျင်းပသည့် “ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် ၂၀၂၁” ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(SCO)အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ အတွင်း နိုင်ငံပေါင်းစုံတပ် အင်ဂျင်နီယာထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့၊ ဆက်သွယ်ရေးထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့များ၏ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုများအား စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ အိုရန်ဘာ့ဂ်ပြည်နယ် Donguzလေ့ကျင့်ရေးကွင်းတွင် ကျင်းပသည့် “ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် ၂၀၂၁” ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(SCO)အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ အတွင်း နိုင်ငံပေါင်းစုံတပ်များ မြေပြင်-ဝေဟင် ပူးတွဲစစ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသည်ကို စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ အိုရန်ဘာ့ဂ်ပြည်နယ် Donguzလေ့ကျင့်ရေးကွင်းတွင် ကျင်းပသည့် “ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် ၂၀၂၁” ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(SCO)အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ အတွင်း နိုင်ငံပေါင်းစုံတပ်များ၏ မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ တင့်ကားတပ်များ၏ လှုပ်ရှားမှုများအား စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ အိုရန်ဘာ့ဂ်ပြည်နယ် Donguzလေ့ကျင့်ရေးကွင်းတွင် ကျင်းပသည့် “ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် ၂၀၂၁” ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(SCO)အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ အတွင်း နိုင်ငံပေါင်းစုံတပ်ဖွဲ့ တိုက်လေယာဉ်ဝေဟင်လှုပ်ရှားမှုများအား စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် ၂၀၂၁” တွင် ပါဝင်သည့်နိုင်ငံများက ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(SCO)အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် တရုတ်၊ ရုရှား၊ ကာဇက်စတန်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်နှင့် ဥဇဘက်ကစ္စတန်တို့ဖြစ်သည်။
တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၄,၀၀၀ ခန့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ရာ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၅၀ ကျော်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဖြစ်သည်။#SCO,
SCO “Peace Mission 2021” live-fire drill conducted in Russia
ORENBURG, Russia, Sept. 23 (Xinhua) — Troops participating in the “Peace Mission 2021,”acounter-terrorism military exercise for Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states, conductedalive ammunition drill at the Donguz training range in Orenburg, Russia on Thursday.
The participants of the “Peace Mission 2021” are from eight SCO member states, namely China, Russia, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, India, Pakistan, and Uzbekistan.
The participating troops consist of around 4,000 military personnel, among which over 550 are from China. Enditem
图说1：9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队特战分队执行索降作战任务。 新华社记者 梅世雄 摄
图说2：9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队工程保障队、通信保障队等支援保障力量投入战斗。 新华社记者 梅世雄 摄
图说3：9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队陆航作战力量发射火箭弹。新华社记者 梅世雄 摄
图说4：9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队地面突击群坦克部队迅猛出击。 新华社记者 梅世雄 摄
图说5：9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队战斗机升空作战。 新华社记者 梅世雄 摄
图说6： 9月23日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习实兵实弹演习中，多国联合部队进行陆空协同作战。 新华社记者 梅世雄 摄